Ukuphupha ngesiphelo sokufa Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Ukuphupha isiphelo esingasekhoyo. Amaphupha asithumela imiqondiso, kwaye anokulumkisa ngeemeko ezingathandekiyo. Ukuba uyazi ukutolikwa kokulala ungaziphepha iingxaki ezininzi, koku, qhubeka ufunda esi sikhokelo siluncedo.
I-cul-de-sac yisitrato esinokufikelela kuphela kwelinye icala kwaye sivalwe kwelinye icala. Ke ngoko, ukuqhuba kwindlela enjalo kuyacetyiswa kuphela ukuba indawo esiya kuyo iphelile. Ukuba awuyikhathaleli imiqondiso yezithuthi kwaye ufuna ukuqhubeka nokuqhuba, kufuneka ujike umva ubuye umva ukuze ufumane enye indlela. Nangona kunjalo, kuhlala kunokwenzeka ukuba iibhayisekile kunye nabahambi ngeenyawo baqhubeke kwindlela, kwaye indlela ivaliwe kuphela esiphelweni seemoto. Nokuba kwindawo ye-maze zininzi izinto eziphelileyo, abathi abo bahamba ngazo bacinge ukuba yindlela elungileyo yokuphuma.
Ngengqondo yokomfuziselo, sikwasebenzisa igama elithi "isiphelo esifileyo" xa sibona imeko enxungupheleyo. Xa ujongene nokungabi nathemba, kukho intetho "yendlela engalunganga" okanye "ingxaki". Nabani na ongene kwimeko enjalo, apho angaboni ndlela yakuphuma, uhlala efuna uncedo lwangaphandle.
Ukuba isiphelo esifileyo sibonakala kuthi njengophawu emaphupheni ethu, oku kuhlala kusenzeka kwimeko yokuqala: apha kunokwenzeka ukuba sihambe singaqatshelwa kwisiphelo esincinci esifileyo, ngaphandle kokuya phambili sijike. Nangona kunjalo, ngohlalutyo lwamaphupha, la maphupha ahlala enentsingiselo ebalulekileyo egqitha kwinqanaba lomxholo omsulwa. Ngamanye amagama, isitrato esisekufeni sinexabiso eliphezulu lokomfuziselo njengomfanekiso wephupha. Uwatolika njani ngokuchanekileyo amaphupha esiphelo sokufa?
1 Uphawu lwephupha «isiphelo esifileyo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isiphelo esifileyo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isiphelo esifileyo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isiphelo esifileyo» - ukutolikwa ngokubanzi
Isiphelo esingasekhoyo sihlala sichaza yeka ukuphumeza olwabo uphuhliso. Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kuthatha ukuba umntu ekubhekiswa kuye akaqhubeki kakuhle. Lixesha lokuba ubuyele ekusebenzeni ngakumbi ukufezekisa iinjongo zakho kunye nokuphuhlisa iprojekthi entsha.
Ukongeza, uphawu lwephupha lesiphelo sokufa ngamanye amaxesha sikhomba kwi ubuze kwimisebenzi yabo. Kule meko, ukuphupha akukazichazi ngokucacileyo iinjongo zayo. Ngenxa yoko, imisebenzi yabo iphulukana nentsingiselo. Ngokokuhlalutya ngokubanzi kwamaphupha, ngoku kubalulekile ukuba umamele umntu wangaphakathi, singaya phi kwikamva? Ufuna ntoni ebomini kwixesha elide?
Nabani na ophupha ngokuqhuba isiphelo esingasekhoyo, ukufikelela esiphelweni kwaye ekugqibeleni angazi ukuba ungaqhubeka njani, unokuba ujongene nobomi. akukho mibuzo. Ukutolikwa kwephupha kubona kweli phupha lobunzima apho umntu oleleyo engasifumaniyo isisombululo ngoku.
Uphawu lwephupha «isiphelo esifileyo» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokutsho kohlalutyo lwengqondo lwamaphupha, isiphelo esingasekhoyo sasidla ngokubhekisa kwinto eyadlulayo. Umfanekiso wephupha kufuneka utsalele ingqalelo kwinto yokuba unamathele kwaye uyaphinda mandulo Iindlela zokuziphatha. Ngenxa yoko, awunakho ukuqhubela phambili ebomini. Ngamanye amaxesha kukwa ngamava angekenziwa. Kukujongana nokuvalwa kuphela ngamava acinezelweyo aya kuthi avumele umntu oleleyo ukuba aqhubele phambili ekuhambeni kwexesha.
Kwakhona, kutoliko lwengqondo lwamaphupha, ngamanye amaxesha kucingelwa ukuba isiphelo esingasekhoyo sinokuba luphawu lwesini. Iphupha ke limele isini. Kwezi meko, ngakumbi kumaphupha amadoda, uphawu lubhekisa kukungoneliseki ngokwesini, uloyiko kunye neemvakalelo zokuziva unetyala.
Uphawu lwephupha «isiphelo esifileyo» - ukutolika kokomoya
Uphawu "lokuphela kokufa" luphawu oluhlala luphawu ubuvila ukutolikwa kwephupha ngokwasemoyeni.